Wasiir Caruush oo daahfuray qorshaha 3da sano ee ka jawaabista... | Universal Somali TV
Wasiir Caruush oo daahfuray qorshaha 3da sano ee ka jawaabista masiibooyinka
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gargaarka & Maareynta Masiibooyinka ee Koonfurta Galbeed, Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa daahfuray barnaamij gaar ahi, oo loogu talagalay ka jawaabista iyo ka soo kabashada Masiibooyinka deegaanada Koonfur Galbeed. Qorshahan waxuu soconayaa muddo saddex sano ah (July 2020 illaa June 2023).
Wasiirka ayaa Magaalada Baydhabo ka sheegay in barnaamijkan uu sahli doono in si fudud loo wajaho, loogana jawaabo haddii ay dalka ku soo kordhaan xaalado deg deg ah oo bani'aadanimo.
"Qorshahaan aan daahfurnay wuxuu fududeynayaa in si dhib yar loo wajaho, haddii ay dhacaan masiibooyin kala duwan. Macnaha waxaa weeye in loo diyaar-garoobo masiibooyin ay suurtagal tahay inay dhacaan mustaqbalka dhow." Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa intaa ku daray "Wasaaradeedu waxay xoogga saareysaa in la helo qarashka lagu fulinayo qorshahaan aan daahfurnay iyo in la waafajiyo arrimaha gargaarka, maskaxda waan ku heynaa, waana ku heyn doonnaa."
Cabdinaasir Cabdi Caruush, Wasiirka Arrimaha Gargaarka & Maareynta Masiibooyinka ee Dowlad Goboleedka Koonfurta Galbeed ayaa Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ku ammaanay in uu Wasaaradiisa ka taageeray daahfurka qorshaha saddexda sano ee ku aadan ka jawaabista masiibooyinka.
Wasiir Caruush ayaa sidoo kale Dowladda Federaalka kaga mahadceliyay dadaalkeeda la xiriira ka jawaabista xaaladaha bani'aadanimo, ee xilligan soo wajahay Koonfur Galbeed.
Koonfur Galbeed ayaa xilligan la tacaaleysa xanuunsidaha COVID-19 ee Coronavirus uu keeno, fatahaado ka dhashay roobab xoogan iyo ayax cagta mariyay dalagii beeraha ee sanadkan la fillaayay inay soo go'aan.
Kan-xigaMadaxweyne Qoorqoor oo fagaare kula h...
54,017,787 unique visits